Sida loo cadaadiyo loona kala furfuro faylasha Linux | Laga soo bilaabo Linux
Qodobkaan waxaan ku baran doonnaa cadaadi oo kala furfuro faylasha ka soo qaad qaybta aad ugu jeceshahay GNU / Linux, dhammaantood adoo adeegsanaya amarrada qalabka. Waa maqaal loogu talagalay dadka bilowga ah oo ku jira kuma soo dari doonno daaweynta tarballs sida casharrada kale, maaddaama ay kaliya muujineyso sida cadaadiska iyo hoos u dhaca loo sameeyo iyada oo aan lagu xirin aaladda daamurka ee cajiibka ah.
In kasta oo riixitaanka iyo hoos u dhigidu ay fududahay, dadka isticmaala inta badan waxay ka baadhaan internetka sida loo sameeyo ficilladan. Waxaan u maleynayaa in si ka duwan nidaamyada kale ee hawlgalka sida MacOS iyo Windows halkaas oo qalab garaaf ah oo aad u gaar ah oo macquul ah loo adeegsado, GNU / Linux badanaa waa la soo bandhigaa qaabab badan iyo qalab kala duwan oo mid kasta oo ka mid ah, in kasta oo ay sidoo kale jiraan qalab fudud oo xagga garaafka ah ...
Xakamaynta iyo hoos u dhaca waxaan u adeegsaneynaa laba xirmo oo aasaasi ah, maadaama ay yihiin, malaha, qaababka ugu baahida badan ee aan la kulanno inta badan markaan ka shaqeyneyno Nidaamyada Unix-like. Waxaan ula jeedaa gzip iyo bzip2.
1 Ku shaqeynta gzip
2 Ku shaqeynta bzip2
Ku shaqeynta gzip
para ku cadaadi gzip, Qaabka aan usameyneyno waa Lempel-Zi (LZ77), mana ahan ZIP sida oo kale, maadaama magaca uu horseedi karo jahwareer. Magaca wuxuu ka yimid GNU ZIP, waxaana loo sameeyay bedel ahaan qaabka ZIP, laakiin isku mid maahan. Waxaan rabaa inaan caddeeyo taas ... Hagaag, inaan isku cadaadiyo feyl:
Tani waxay soo saartaa feyl loogu magac daray mid u dhigma kan asalka ah oo leh kordhinta .gz, tusaalihii hore waxay noqon laheyd document.txt.gz. Taabadalkeed, wax ka beddel magaca soo saarida mid gaar ah:
para siidayn Waxa horay loo cadaadiyey ayaa si siman u fudud, in kastoo aan isticmaali karno laba amar oo kala duwan oo leh saameyn isku mid ah:
Waanan heli doonnaa feylka siib la'aan la'aan .gz kordhin.
Ku shaqeynta bzip2
Sida for bzip2, wuxuu la mid yahay barnaamijkii hore, laakiin wuxuu la socdaa algorithm isku soo ururin ka duwan oo loo yaqaan 'Burrows-Wheeler' iyo 'Huffman coding'. Kordhinta aan ku hayno kiiskan ayaa ah .bz2. Si loo cadaadiyo feyl, waa inaan isticmaalnaa:
Tani waxay keenaysaa dokumenti cufan.txt.bz2. Waxaan sidoo kale ku kala duwanaan karnaa magaca wax soo saarka oo leh xulashada -c:
Xadgudubka waxaan u isticmaali lahaa ikhtiyaarka -d ee qalabka bunzip2 oo magac u yaal ah:
Wixii macluumaad dheeraad ah waad isticmaali kartaa lab waxaa ku xigay taliska ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo cadaadiyo loona kala furfuro faylasha ku jira Linux
Aad baad ugu mahadsantahay qoraaladaada, marwalba way faa'iido leeyihiin.
Waxaa laga yaabaa inay xiiso laheyd in sidoo kale la xuso xz, maadaama sidoo kale xoogaa loo isticmaalo. Waxay kuxirantahay meel udhaxeysa bzip2 (tartiib tartiib ah, laakiin waxbadan baa cadaadiya) iyo gzip (dhakhso badan, laakiin waxtar yar). Tani waa saf ballaaran, maxaa yeelay sida wax walba ... waxay kuxirantahay. Taarrada lagu daro faylasha Debian / Ubuntu .deb badanaa waxay ku yimaadaan iskudhaf qaabka xz.
Habka loo adeegsado waxay la mid tahay amarrada kale sos.
Jawaab Jaime Perea
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo in tan la sameeyo laakiin tar.gz maadaama ay tahay tan ugu isticmaalka badan (feker ahaanteyda marka loo eego wax kasta oo aan ka soo dejiyo internetka)
Maxay ka yiraahdaan qaabab badan oo caan ah laakiin qaab-dhismeedka iskudhafka badan sida .7z? Waa inay iyaguna magacaabaan
Nabadeey Jose, waxa ku dhaca faylasha tar.gz waa inaad isticmaasho amar kale kaas oo ah daamur iyo kiiskan amarka daamurku isagu kaligiis ma cadaadiyo (ama hoos uma dhigo) laakiin waxaa loo isticmaalaa in lagu kooxeeyo (ama aan lakala bixin) dhowr faylal oo mid ah, tani waxay leedahay isdhexgal amarka gzip iyo bzip2 oo aad ku cadaadin karto oo aad ku burburin karto.
Ku jawaab omeza
Xaqiiqdii waad saxan tahay Ernesto, qaab 7z oo bilaash ah oo boos u sameysmaya naftiisa Windows, bedelida zip iyo rar, oo miyayna sheegin?
Qarnigii 21aad oo wali la adeegsanayo amarro si loo cadaadiyo feyl fudud? Qoraalkani waa murugo
Waxaa laga yaabaa inay iyaduna xiiso laheyd